July | 2010 | शहरबाट शब्दहरु
Posted on July 22, 2010 by Subin
श्रावण ५, जुलाई २१ – बुधबार दशौं दिन अलि अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई सम्झन्छु । अलि अलिकति खुशी हुँदा नि म तिमीलाई सम्झन्छु । खैं के भयो मलाई आजभोली तिम्रै सपना देख्छु, खैं के भयो मलाई आजभोली तिमै … Continue reading →
मायामा शंका जायज़ छ !
Posted on July 20, 2010 by Subin
श्रावण ३ जुलाई १९ – सोमबार आठौ दिन पहिलो ब्रत आज । तिम्रो निकै याद आयो । अनि ब्रत समाप्तिको साँझ तिमीले बनाएको पहेलो दाल भात, फ्राई आलु र एक कटौरा दही । यसको खुब स्वाद उठेको छ मनमा । … Continue reading →
किनारा कहाँ छ ?
Posted on July 19, 2010 by Subin
श्रावण २, जुलाई १८ – आईतबार सातौ दिन मायाका कुरा र प्रसंग लेख्नु अघि प्रथम ओम् नम शिवायको उच्चारण गर्ने चाहन्छु । आज मेरो पहिलो ब्रत । ब्रतका समयमा प्राय म कलम र मनमा अनेकन अभद्र कुराहरु भित्रिन दिन्न । … Continue reading →
Posted on July 18, 2010 by Subin
श्रावण १, जुलाई १७ – शनिबार छैठौ दिन उसैपनि शनिबार । प्राय बिदा र रमाईलोमा बित्ने दिन हो यो । तर म बैचैन छु जहाँ तिम्रो यादहरु मलाई फिटिक्कै रमाइलो गर्न दिँदैनन् न त बिदाको आभाष गर्न दिन्छन् । यो … Continue reading →
‘ज्यान दिन्छु, प्रेम गर्छु यी सब भन्ने कुरा नै हुन्’
Posted on July 17, 2010 by Subin
असार ३२, जुलाई १६ – शुक्रबार पाँचौ दिन मुझसे बिछडके खुश रहेते हो, मेरी तरहा तुम भी झुठे हो । समयको साता बित्न कति सजिलो । हिजो निस्किएको एक यात्री आज पाँचौ दिन बितेछ । र यो महिना असार महिनाको … Continue reading →
Posted in म र मेरो कुरा	|3Comments
Posted on July 16, 2010 by Subin
असार ३१, जुलाई १५ – बिहिबार चौथौ दिन आफ्नो केही मनपर्ने बस्तु र सामान हराउँदा कति मन दुख्छ । तर आफ्नै मुटु र आत्मा छोड्नु पर्यो भने कस्तो अवस्था हुन्छ । म आफै एक्लो ऐना अघि प्रतिबिम्बित अनुहारसँग लगातार प्रश्न … Continue reading →
एक्लो प्रहरमा तिम्रो यादहरु…
Posted on July 15, 2010 by Subin
असार ३०, जुलाई १४ – बुधबार तेश्रो दिन आओ तिम्रो यादहरु । म अझै निदाएको छैन ॥ एक्लो हुनु पनि नियति नै हो । संसारमा त्यहीकारण कोही पनि एक्लै बस्न र रहन नचाहेको हुनुपर्छ । नत्र किन रोमियोले जुलियटलाई आत्मादेखि … Continue reading →
Posted on July 14, 2010 by Subin
असार २९, जुलाई १३ – मंगलबार – दोश्रो दिन बिहानीको ताजापन हराएको छ । अघिल्लो रात जबरजस्ती निदाएका एक जोडी आँखाहरु अझै तिमीमा समाहित भइरहेको छ । यो मौकामा म अन्तरआत्मा बाट यो दृश्यलाई झेकबार लगाउन नसक्ने अवस्थामा छु । … Continue reading →
तिमी नहुँदा …
Posted on July 13, 2010 by Subin
असार २८, जुलाई १२ पहिलो दिन झरि परिरह्यो मन थामिदैन आँसु किन भन्छ निर्माहीलाई मनमनै मेरी मायालु निकै महिनाको समयपछि उनी फेरि टाढिइन् । म प्राय लेख्थे उही निष्ठुरी समय हो । जुन मिलन र विछोडका अध्यायहरुमा आफुलाई अग्रगतिमा प्रस्तुत … Continue reading →